Ka Hor Abaal Marinta Ballon d’Or-ka,Carles Puyol Oo Amaan Ugu Qubeeyay Lionel Messi: “Xataa Cadaalad Ma Ah Shan Ballon d’Or Oo Kaliyi” | Hangool News
Ka Hor Abaal Marinta Ballon d’Or-ka,Carles Puyol Oo Amaan Ugu Qubeeyay Lionel Messi: “Xataa Cadaalad Ma Ah Shan Ballon d’Or Oo Kaliyi”
24 saacdood wax ka yar ayaa ka hadhay waqtiga la bixin doono abaal marinta qaaliga ah ee Ballon d’Or-ka oo ay iskugu soo hadheen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo Neymar Jr, waxaana abaal marintan ka hor Messi amaan kala duldhacay halyaygii hore ee Barcelona ee Carles Puyol kaas oo sheegay in shan Ballon d’Or ayna xataa cadaalad ku ahayn waxa uu Messi samaynayo.
Carles Puyol ayaa sidoo kale sheegay in haddii ay jirto koox laba xili ciyaareed oo isku xigta ku guulaysan karta Champions Leaque-gu in ay kooxdaasi noqon doonto Barcelona. Habeen danbe fiidnimada ayaa la bixin doonaa abaal marinaha sanad laha ah ee FIFA xaflad wayn oo ka dhici doonta Zurich. Lionel Messi ayaa ah xidiga ugu cad cad ee markii shanaad ku guulaysan kara xidiga aduunka ugu fiican inkasta oo ay tahay abaal marin ku xidhan codka la dhiibto.
Carles Puyol ayaa yidhi: “Waligaa ma ogid waxa dhici doona, laakiin wax lala yaabo ayay noqon doontaa oo ah caddaald daro aad uwayn haddii aanu Messi ku guulaysan Ballon d’Or-ka, waxa ugu fiican ee uu Messi qabto ayaa ah in uu markasta horumar samaynayo. Hadda Messi waa ciyaartoy dhamaystiran, waxayna u muuqataa in ayna xadidnayn waxa uu awoodo in uu qabtaa”.
Carles Puyol ayaa aaminsan in Messi uu ku guulaysan karo abaal marino badan Ballon d’Orka ah xataa haddii uu isniinta ku guulaysan isaga oo sheegay in ayna ahayn wax cadaalad ah in Messi uu ku guulaysto shan Ballon d’Or oo kaliya marka la barbar dhigo waxa uu samaynayo.
Carles Puyol ayaa yidhi: “Ma aha sidii uu Lionel Messi barri ciyaaraha ka fadhiisanayo oo kale, haddii uu isniinta ku guulaysto Ballon d’Or-ka oo uu sidaa ku soo socdo, waxa uu xataa ku guulaysan karaa kuwo badan. Xataa shan Ballons d’Or xaqiiqdii cadaalad uma aha Messi”.
Intaa kadib ayaa Puyol la waydiiyay in kooxda Luis Enrique ee Barcelona ay noqon karto kooxdii ugu horaysay ee laba xili ciyaareed oo isku xiga ku guulaysatay koobka Yurub ee Champions Leaque wuxuuna Puyol ku jawaabay: “Haddii ay ku sii socdaan xamaasada, rabitaan la mid ah iyo hufnaanta, wax kasta ayay ku markale ku guulaysan karaan. Xaqiiqdii wax sahlan ma aha, sababtoo ah waxaa ku soo maraysa maalin ay kaa jiifto iyo dhibaato dhaawac, laakiin haddii ay jirto koox awood u leh in ay markii labaad oo xidhiidh ah ay ku guulaysto waxay noqon doontaa Barcelona”.